Izingubo ngezansi kwedolo, noma kancane ngenhla - lolu obuphelele ibizwa ngokuthi "Okuningi". Fashion ngaye emuva-yalolucwaningo 50-60, kwaba othandwayo kuleli '70, futhi ngesikhathi yokwakha kabusha, kodwa ke ukhohlwe ngakho. Futhi manje lokhu imodeli entsha masinyane. ku fashion. Midi - ubude enemisebenzi ngempela, okuyinto owesifazane ofanele kunoma Yakha futhi ukuphakama, kungakhathaliseki ubudala.
Kunezinhlobo ezintathu mkhuba ethandwa kakhulu esetshenziswa Abaklami ukudala amaqoqo zabo izingubo ezinjalo. Eyokuqala wabo - izingubo ezimnyama ngezansi kwedolo. Ngakho embodiments asigcini izitayela. Okulandelayo - uhlobo isixhumanisi ukuze esidlule. Letindlela kufanele imikhono, okuyinto zihlukaniswa Imi yabo, ubude ivolumu. Futhi kulo mkhuba bavame ukusebenzisa ukusikeka yendabuko ngokuvamile livalelwe esiphezulu, ezinjengenyanga. Owokugcina mkhuba - bagqoke ngezansi kwedolo nge isiketi Fluffy. Ngakho lapho ukuhlanganisa isibindi futhi romance. Lapha, Ukugcizelelwa neckline noma okhalweni. Isibonelo ukubambisana okunjalo bangaba ingubo, corset, okuyinto ubonisa esiqinile style Retro, kodwa ngesikhathi esifanayo zibukeke kwenza isibalo ngaphezulu ethambile ngenxa umphetho aluhlaza. Kwangezikhathi ngaye ukuba asebenzise izinhlobo ezahlukene kusukela mncane, ugeleza flying, nzima, enika imibimbi ecacile futhi ijulile.
A ezihlukahlukene elikhulu onobuhle ivumela ukukhetha ingubo ngezansi kwedolo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, kungaba ehlobo kushisa noma kubanda ebusika. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ingubo enjalo kumele akhethwe kahle izesekeli nezicathulo ukuze ngokuphelele umphelelisi isithombe sakho. Futhi ingasetshenziswa ukufihla sibalo amaphutha futhi ukugqamisa zako.
Figure kanye ngubo
Kusukela choice kwenziwa, ikhumbula ukuma imilenze ke ngaphansi amathole sasivumela ephelele kufanele akhethe izingubo ngezansi kwedolo, okuzokwenza ukumboza ezimbalwa. Uma ufuna ukugcizelela waistline futhi zibukeke bandise okhalweni, kufanele sinake indlela esigqoka, nge top Okuningi esinamathelayo umphetho wengubo Fluffy. Kodwa uma, kunalokho, okhalweni olubanzi , futhi kukhona isifiso kuyaqondakala ukufihla esiswini, kulesi simo, ikhambi ephelele kungaba igqoka imodeli nge isiketi emincane futhi ogibele khulula.
Namuhla kuba ngaphezu stylish ibhande mncane ezinemibala egqamile. Girls kufanele sibheke imodeli kuhlangene, lapho phezulu eyenziwe ukotini uqweqwe umphetho-insimbi - ngendwangu ukukhanya. Lokhu ngubo kufanelekile kokubili ukusetshenziswa nsuku zonke futhi iholide.
Le sizini, ecebile umbala izingubo ngezansi kwedolo. Ezinye izithombe ethulwa esihlokweni. Ngo amaqoqo ahlukahlukene imfashini ubonisa anhlobonhlobo shades kusukela amaphastelsi ukuba licace: grey, onsundu, burgundy, itherkhoyisi, pink, blue, okhakhi, yebo, zakudala abamnyama. Khona-ke kukhona yezicathulo, avame kuba iseli noma amadayimane. Ungakhohlwa mayelana nezisusa yobuhlanga, okuyinto kuvetwa ngokuningiliziwe ezifana ngombala obuyimvukumvuku, lesikhumba, izimpaphe, velvet futhi brocade. Libuye kuvunyelwe ukusebenzisa umphetho kanye emiphemeni. Uleyisi futhi angenisa izindwangu - lawa izinto esetshenziswa abaklami abaningi emaqoqweni zabo prodemonstratsii ubufazi, ubulili kanye okunethezeka izingubo.
Inhlanganisela ne ingubo. Ukukhetha nezicathulo kanye izesekeli
Yini sihlanganise igqoka ngezansi kwedolo, isithombe zazo okwethulwa kulesi sihloko?
Ngakho, esikhathini ukufudumala ingubo engu-Okuningi kungenziwa kuhlangene lesikhumba iDemo jackets, jackets efudumele, jackets kanye Cardigans. Futhi uyobheka ezinhle elingenamikhono ngqo futhi zingabonisi ngalé owufanelekela, futhi ubude bawo bangase babe ngenhla kwamadolo noma midi.
Ukucabanga ngokusebenzisa yakho kusihlwa isithombe, ngokucophelela ukhethe izesekeli uyobheka bokuzwana izingubo zakho. Uma dress yakho has a neckline ngezansi kwedolo, kuyafaneleka ukunaka imihlobiso onjalo afana ngazo umgexo noma ubuhlalu. Ngempumelelo ukuqeda umnsalo wakho bamba noma esikhwameni ku wayibhinca eside. Izicathulo futhi ukhethe kuye kumcimbi kanjani ozothileyo; kungaba enkantolo izicathulo, iqakala amabhuzu, Classic "hairpin" noma izimbadada.
Kodwa kuwufanele ukukhumbula ukuthi izicathulo ezemidlalo ukugqoka ngaphansi ingubo Okuningi akudingekile Kunoma yikuphi, okufanayo uya moccasins kanye amabhuzu okusezingeni eliphezulu. Uma ufuna ukuba zibukeke bude imilenze, kufanele akhethe izicathulo kanye tights (noma amasokisi) e ithoni efanayo.
Ibhizinisi isitayela yokugqoka ubude "Okuningi"
Ukuze wenze yayo ngendlela ibhizinisi isitayela iwukukhetha igqoka ifomu esinamathelayo. I okufana kokubili ayisesemikhulu phansi isiketi ngqo. Ungasebenzisa njengoba ibhantshi ibhekwa, Vest noma Cardigan ukukhanya. Khumbula ukuthi umklamo izesekeli, izicathulo kanye izikhwama kufanele igcinwe.
Gqoka ngezansi ngamadolo - nansi into okungukuthi ngokuqinisekile zibone indawo yazo ikhabethe lakho. Nge le ngubo, ungakha ezihlukahlukene inhlanganisela emangalisayo futhi sikhulu isifazane, nabo bonke nje ngenxa izesekeli akhethwe kahle. Sifisela wena inhlanhla okuhle ekukhetheni edingekayo izingubo izimfanelo!
Okuvamile sigqoka futhi kusihlwa igqoka inkanyezi
Ibhulukwe 7/8 yini okufanele uyigqoke? Zabesifazane ibhulukwe ehlobo
Sigqoka ne amahlaya. Funny Fancy Dress
Fashion Tips: sizogqokani jacket pink?
Indlela ukukhulisa isondo ngebhayisikili entabeni: Amathiphu
Umfanekiso Don enovelini "Futhi epholile Flows Don". Kwebalingisi kule noveli "Futhi epholile Flows Don"
Ubhontshisi e Utamatisi Sauce
Umlobi futhi intatheli Yan Valetov: Biography nemisebenzi
DOCX format: uvula
Umlobi we-VGTRG e-Italy Asya Yemelyanova
Isikhunta e umshini wokuwasha: indlela ukuhlukana unomphela
Umlingisikazi Maria Klimova - indlela ebhayisikobho